Imingxuma yoMlilo yaseTshayina yaNgaphandle,Inkuni yoMlilo oTshayo iNkwenkwezi eRound kunye neNyanga,Indawo yePoker yoMlilo,iSpark Screen, abavelisi kunye nabanikezeli bePatio yeNdawo yangasemva kweNdawo yangasemva |THYH
Imingxunya yoMlilo yaNgaphandle, iNkwenkwezi yoMlilo etshisa iNkwenkwezi kunye neNyanga, iFireplace Poker, iSpark Spark, kwiPatio yaNgasemva yeTerrace engasemva.
UKHUSELEKO KUQALA: Nanini na kwaye naphi na apho usebenzisa le ndawo yokutshisa umlilo, ukhuseleko luhlala luphambili. Uyilo lwemesh eqinileyo kwiscreen kunye nokusikwa kunokuthintela ngokufanelekileyo iintlantsi, amalahle kunye nobutyobo ekubhabhezeleni ngaphandle kwendawo yokutshisa. okanye amalahle kwaye uphakamise ngokukhuselekileyo isikrini se-mesh.Ngalezi zikhuselo, unokonwabela ngokukhuselekileyo ukufudumala kwendawo yethu yomlilo ngaphandle okuzisa kuwe.
OKUKHANGELAYO & OKUDLULEKILEYO: I-intshi ye-intshi ye-intshi ye-intshi yomlilo eyenziwe ngobushushu obuphezulu bentsimbi egqunywe ngentsimbi iyamelana nemozulu.Uyilo olomeleleyo olunepateni yokusikwa kwenkwenkwezi kunye nenyanga ikhanyisela urhatya lwakho kwaye iqinisekisa ukungena komoya okungaguqukiyo kumadangatye amaninzi.
UKUSETHA OKUKHAWULEYO NAPHI NA: Akukho zixhobo zinzima zifunekayo!Ufakelo lubhekiselele kwimiyalelo yokusetyenziswa okanye yofakelo lwevidiyo yoluhlu.Ifanelekile kwimisitho yangaphandle efana nomlilo ovuthayo, imililo yenkampu, ibbq yosapho, okanye ukukhempisha nabahlobo.Umsesane wangaphandle uvumela ukuphatheka lula xa sele upholile ngokukhuselekileyo. Ukuchitha ubusuku obubandayo basebusika kunye nabo ubathandayo bekhatshwa yile grill yokutshisa umlilo weenkuni!Yakhiwe ngentsimbi epeyintiweyo ekwazi ukumelana nobushushu, lo mngxuma womlilo ovuthayo unokumelana ne-752℉-1112℉.
UKHUSELEKELE OKUNGAKUMBI: Umgodi woMlilo waseTianhua unesiciko somlilo esikhuselayo ukukhusela iintlantsi kunye namalahle avuthayo ukuba angabaleki.Isitya somlilo siza kunye nesixhobo esisebenzayo sokukhupha iinkuni okanye ukususa ngokulula isiciko se-mesh ngokukhuselekileyo.Imilenze emi-3 eyomeleleyo iqinisekisa ukuzinza kunye nenkxaso yomlilo wokutshisa iinkuni.
ZONWABISA IXESHA: Indawo yomlilo yangaphandle ifaneleke ngokugqibeleleyo ukuba abantu abaninzi bahlale bejikeleza kwipatio, eyadini okanye egadini. Lilonke 30″ ubukhulu X 20″ high X 8″ ubunzulu, 14″ ubude ngaphandle kwe-spark screen kunye ne-26″ yangaphakathi. Ngorhatya olupholileyo, ngomculo ophumlayo okanye imuvi yangaphandle, olunjani uvuyo ukosa imarshmallows phantsi kwesibhakabhaka esineenkwenkwezi ujikeleze umngxuma womlilo oshushu ngaphandle!
Ngaphambili: Ukusebenza okuphezulu kweGrate yoMlilo kunye neTheyibhile
Okulandelayo: 24″x1.25″ SOLID Steel FIREPLACE GRATE
Umngxunya woMlilo Inkuni evutha iNkwenkwezi eRounding neNyanga
Imingxuma yomlilo yaNgaphandle
KwiPatio yeTerrace yaNgasemva
Umzi-mveliso unokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokuphuhlisa iimfuno zezoqoqosho kunye nezentengiso, ukuze iimveliso zabo ziqatshelwe kwaye zithembeke, yiyo loo nto sikhethe le nkampani.
NguMateyu Tobias ovela eBorussia Dortmund - 2018.11.02 11:11
Umgangatho ophezulu, ukuSebenza okuPhezulu, ukuCla kunye neMfezeko, kufanelekile ukuba nentsebenziswano yexesha elide!Sijonge phambili kwintsebenziswano yexesha elizayo!
NguDana waseMzantsi Afrika - 2018.12.30 10:21